SAMSUNG News - Androidsis ကိုထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ ဖုန်း၊ တက်ဘလက်နှင့်အခြားအရာများ Androidsis
Samsung သည်တောင်ကိုရီးယားတွင်လူသိအများဆုံးနှင့်အရေးအပါဆုံးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီးကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်ရှိနေသည်။ ကုမ္ပဏီသည်အီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုး (ရုပ်မြင်သံကြားစက်များ၊ အမှတ်တရများ၊ ကွန်ပျူတာများ) နှင့် Android operating system အနေဖြင့်တက်ဘလက်များနှင့်စမတ်ဖုန်းများထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်လူသိများသည်။ Samsung သည်လက်ရှိတွင်ကမ္ဘာ့အရောင်းရဆုံးဖုန်းကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။
ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်း၊ ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းနှင့်စျေးနှုန်းအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနိုင်သော Samsung ဖုန်းများမှာ ၄ င်းတို့၏အရည်အသွေးများဖြင့်ထင်ရှားသည်။ ဤကဏ္တွင်သင်ကုမ္ပဏီနှင့်၎င်း၏ဖုန်းအကြောင်းသတင်းအားလုံးကိုရှာဖွေနိုင်လိမ့်မည်။ ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ၏ဖုန်းများ၏သတင်းများ၊ ထုတ်လွှင့်မှုများနှင့်သုံးသပ်ချက်များအားလုံး။
por Manuel Ramirez လွန်ခဲ့တဲ့4လအတွင်း .
Good Lock မှတစ်ဆင့် One UI 3.0 အတွက် update အသစ်ကိုသင်ပြတော့မည်။
Samsung က Galaxy XCover5ကိုမြေအောက်လုံး ၀ စမတ်ဖုန်းအဖြစ်ပြသသည်
855 Snapdragon 2019 ကို Galaxy A82 5G တွင်ပြန်လည်ရှင်သန်ရန် - Geekbench တွင်ဖုန်းပေါ်လာသည်
Galaxy A82 5G သည် Samsung မှလာမည့်စမတ်ဖုန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ကောလဟာလများစွာထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။
Samsung သည် Wear OS ကို၎င်း၏စမတ်နာရီများတွင်ပြသခဲ့သည်
Alive and kicking: Galaxy SII သည် Android 18.1 ပါသော LineageOS 11 ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုရရှိသည်
၁၀ နှစ်နီးပါးအရွယ်ရှိသေးသည့် Samsung Galaxy SII သည်ဆိပ်ကမ်းနှင့်သက်ဆိုင်နေဆဲဖြစ်သည်။
မတ်လအတွင်း Galaxy Tab S7 အတွက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ patch
Samsung Galaxy Fold သည် UI 3.1 update ကိုရရှိသည်
Samsung သည်၎င်း၏ UI 3.1 update ကိုအလယ်အလတ်တန်းစားနှင့်အဆင့်မြင့်ဖုန်းများအတွက်ဆက်လက်ချဲ့ထွင်သည်။ ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ ...
Samsung Galaxy A32 4G သည် Helio G80 နှင့် One UI 3.1 တို့ဖြင့်တရားဝင်ဖြစ်သည်
por DaniPlay လွန်ခဲ့တဲ့5လအတွင်း .
အာရှကုမ္ပဏီကြီးသည်ရုရှားတွင် Galaxy A32 4G မော်ဒယ်ကိုကြေငြာရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
Samsung Gear Sport နာရီကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်ရနိုင်သည်
'clamshell' ဖုန်းသစ် Samsung ကို W2018 ကိုတရုတ်ပြည်မှာတရားဝင်ပြသလိုက်ပြီ
Galaxy S9 ရဲ့ specs တွေက Geekbench မှာပေါက်ကြားခဲ့တယ်
Samsung Gear IconX, IFA 2017 တွင်ပထမဆုံးထင်မြင်ချက်များ
Samsung Gear Sport ကို IFA 2017 မှာစမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်
Samsung ကကို USB Drivers
Samsung Gear S3 တွင်အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်နာရီမျက်နှာအသစ် ၃ ခုရှိသည်